Thiri Lin Htut's Likes - Myanmar Network
Thiri Lin Htut's Likes
Back to Thiri Lin Htut's Page
နှစ်ခါထပ်သုံးနိုင်သော စကားလုံးများ ဒီဆောင်းပါးကတော့ “had had” ၊ “is is” စသည်ဖြင့် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကို နှစ်ခါထပ်ပြီး သုံးတဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီက ထုတ်တဲ့ Word ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ စာရိုက်မယ်ဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကို… Discussion နှစ်ခါထပ်သုံးနိုင်သော စကားလုံးများ 54 Likes
English for Hotel and Catering Industry(Unit… ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ စားပြီးသောက်ပြီးလို့ နောက်ဆုံးပိတ်မှာ အချိုပွဲနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အခါ မှာကြားပုံ၊ လက်ခံပုံတွေလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ Unit 10 Desserts and Cheese What’s for dessert? (အချိုပွဲအတွက်ဘာရှိလဲ) Guest… Discussion English for Hotel and Catering Industry(Unit… 23 Likes အရေးကြီးသည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော လျှို့ဝှက်ချက်… လျှို့ဝှက်ချက် (၁) တွေးတောခြင်း မပြုပဲ အင်္ဂလိပ်စကားကို အလိုအလျှောက်ပြောခြင်း စကားလုံးများသည် မိမိ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ အလိုအလျှောက်လွယ်ကူစွာထွက်လာခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသူတိုင်း… Discussion အရေးကြီးသည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော လျှို့ဝှက်ချက်… 245 Likes အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရာတွင် Reading skill သည်အရးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကား (Native Language) တွင်ပင်လျှင် စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွင်ခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတရရှိနိုင်ခြင်… Discussion အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? 42 Likes
သိသင့်သော်လည်း မသုံးသင့်သော အလေးအနက်ပြုစကားလ… အောက်ဖော်ပြပါ နာမ၀ိသေသန တွေကို မသုံးရဘူးလို့ တားမြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ပြောဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားလုံးတွေကို တကယ်တမ်း သင့်တော်တဲ့ နေရာတွေကလွဲလို့ လျှော… Discussion သိသင့်သော်လည်း မသုံးသင့်သော အလေးအနက်ပြုစကားလ… 93 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Not… Not anywhere near (အများကြီး လိုသေးတယ်) အများကြီးနည်းသေးတယ်၊ လိုသေးတယ်လို့ အလေးအနက် ပြောချင်ရင် not anywhere near ကို သုံးနိုင်တယ်။ I've not done anywhere near enough work to pass the exam.စာမေးပ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Not… 149 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Heav… Heaven knows (ဘုရားမှ သိမယ်။) မသိဘူးလို့ အလေးအနက် ပြောချင်ရင် heaven knows ကို သုံးနိုင်တယ်။ 'Why has Anne changed her mind about marrying Jack?''Heaven knows! She hasn't even given Jackareason… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Heav… 155 Likes ဖုန်းနဲ့ စာပို့တဲ့အခါ သတိပြုဖွယ်အချက်များ (B… [Zawgyi] ဖုန်းဆက်ဖို့ အဆင်မသင့်တဲ့အခါ ဖုန်းနဲ့ (SMS) ပို့လေ့ရှိကြပါတယ်။ အလုပ်အတွက် SMS သုံးရင် ဘာတွေကို သတိထားသင့်သလဲ။ အောက်ဖော်ပြပါ SMS တွေ အပြန်အလှန် ပို့ထားတာကို ကြည့်ပါ။ A: Will ubin klcc a… Discussion ဖုန်းနဲ့ စာပို့တဲ့အခါ သတိပြုဖွယ်အချက်များ (B… 91 Likes Love စကားလုံး၏ လွဲမှားမှုများ လွဲမှားမှုတွေ ။ “ချစ်သူ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “lover” လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲလိုပဲ လူတော်တော်များများသုံးနေကြတယ်။ love ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ချစ်တယ် တဲ့။ ဒါတော့ လူတိုင်းသိမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ word/v… Discussion Love စကားလုံး၏ လွဲမှားမှုများ 396 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Funn… Funny you should say that (တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ) တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလက်စ စကားအကြောင်း မသိဘဲ ၀င်ပြောတာ အံ့သြစရာ၊ မမျှော်လင့်ဘဲ အကြောင်းအရာချင်း ဆက်စပ်နေရင် Funny you should say that လို့ ပြောနိုင်တယ်။… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Funn… 208 Likes ထုတ်ပြောလာအောင် ဆွဲဆောင်တတ်ပါစေ (Pull them w… ကိုယ့်ဘက်က ပြောစရာရှိတာကို တစ်ဘက်သား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိအောင် ပြောတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို PUSH (တွန်းပို့) နည်းလမ်းတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ အစီအစဉ်တွေကို တစ်ဘက်သား သိအောင် ပြောနိုင်မှ… Discussion ထုတ်ပြောလာအောင် ဆွဲဆောင်တတ်ပါစေ (Pull them w… 45 Likes Me-2 သြစတေးလျှမှာ အနေကြာလာတဲ့ အခါတော့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောတာ တဖြည်းဖြည်း နားရည်ဝ လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအခါ အချို့ အရင်က အသုံးများ နားယဉ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီ အသုံးအနှုံးတွေကို အခုအချိန်… Discussion Me-2 44 Likes ဖိတ်ကြားစာရေးသားနည်း၊ ဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခြံ… An invitation (ဖိတ်ကြားစာ) Hi John I would like to invite you to be our guest at the Brazilian Grand Prix in March. The event is being held at Interlagos and we would like you to join us for lunch… Discussion ဖိတ်ကြားစာရေးသားနည်း၊ ဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခြံ… 73 Likes ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၁ (Saying T… ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၁ Fred Many thanks for helping with the conference. I’m very sorry that so few people came on Saturday - let’s not organize the final session in the middle ofapubl… Discussion ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၁ (Saying T… 74 Likes
ဗြိတိသျှနဲ့ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်စကား အသုံးအနှုန်း… video ဗြိတိသျှနဲ့ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်စကား အသုံးအနှုန်း… 142 Likes ဘယ်မှာဝယ်သလဲလို့ မေးနည်း (How to ask someone… video ဘယ်မှာဝယ်သလဲလို့ မေးနည်း (How to ask someone… 91 Likes dog အသုံးအနှုန်းများ ဒီ forum မှာ တစ်ယောက်ယောက်ရေးထားဖူးသလားတော့မသိပါဘူး။ ရှိရင်တော့ နှစ်ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတာပေါ့လို့ နှလုံးမူပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ မြန်မာစကားမှာခွေးကို မကောင်းတဲ့အနက်နဲ့တွဲဖက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ “ခွေးကျင်… Discussion dog အသုံးအနှုန်းများ 85 Likes အင်တာနက်တွင် အင်္ဂလိပ်လို ချက်တင် (chatting) လ… &lt;Zawgyi&gt;အခုခေတ်မှာ အားလုံး အင်တာနက်နဲ့ချည်း ဆက်သွယ်နေကြတော့ အင်တာနက်မှာ ချက်တင် (chatting) လုပ်တဲ့ ဘန်းစကားတွေကိုလည်း နားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးလာတယ်။ အထူးသဖြင့် စာရိုက်ရလွန်းလို့ လက်ညောင်းလာရင် အဲ… Discussion အင်တာနက်တွင် အင်္ဂလိပ်လို ချက်တင် (chatting) လ… 182 Likes
ဆရာစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ဆရာစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ရေးသားသူ - - ခင်နှင်းစိုး ဆရာတယောက်ဟာ သူဘာသင်လဲဆိုတာထက် သူက ဘယ်လိုဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပိုအရေးကြီးတယ် “What the teacher is, is more important than what he teaches.” ဆိုတဲ့ အမေရိကန်စိတ… Discussion ဆရာစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ 66 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Must… I must say (ငါ ပြောကိုပြောရဦးမယ်) ငါ ပြောကို ပြောရဦးမယ် (I must say) ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို တစ်စုံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ဘယ်လိုထင်မြင်တယ်၊ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို အလေးအနက်ထား၍ ပြောလိုသော အခါတွင် အသုံး… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Must… 69 Likes Podcasts for English Language Learners by Da… Common Mistakes (Part 1) ယခု podcast အစီအစဉ်တွင် ဆရာမဒေါ်ဟေမာမောင်မှ လူအများမှားလေ့ရှိသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းအမှားများကို ထောက်ပြသွားပြီး မည်သို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုရေးသားရမည်ကို ပြောပြသွားပါသည်။… Discussion Podcasts for English Language Learners by Da… 194 Likes